ကိုယျဝနျဆောငျစဉျအတှငျး စိတျဖိစီးမှုတှကေို ဘယျလိုနညျးနဲ့ဖွဖြေောကျကွမလဲ ?
Home Parenting ကိုယျဝနျဆောငျစဉျအတှငျး စိတျဖိစီးမှုတှကေို ဘယျလိုနညျးနဲ့ဖွဖြေောကျကွမလဲ ?
ကိုယျဝနျဆောငျ အမြိုးသမီးအမြားစုသညျ ကိုယျဝနျဆောငျတဲ့အခြိနျမှာ ကိုယျဝနျဆောငျတာနဲ့ ပတျသကျပွီး စိတျဖိစီးမှုမြားကို ခံစားကွရတတျပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ ကိုယျဝနျဆောငျခြိနျအတှငျး ခန်ဓာကိုယျပွောငျးလဲမှု၊ ညဘကျနှဈနှဈခွိုကျခွိုကျ အိပျမပြျောတာ၊ မမှေးဖှားသေးတဲ့သားသားမီးမီးအတှကျ စိုးရိမျသောကရောကျရတာတှအေတှကျ စိတျဖိစီးမှုမြား ဖွဈပျေါတတျပါတယျ။ စိုးရိမျပူပနျမှု မွငျ့မားခွငျးက အမှနျတကယျ ကလေးကို ထိခိုကျစနေိုငျပါတယျ။ Cortisol ၊ စိတျဖိစီးမှုဟျောမုနျးက အခငျြးကို ဖွတျသနျးသှားနိုငျပွီး ကလေးရဲ့စိတျပိုငျးဆိုငျရာဖှံဖွိုးတိုးတတျမှုအပျေါ အကြိုးသကျရောကျမှု ရှိနိုငျပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ကိုယျဝနျဆောငျစဉျအတှငျး စိတျဖိစီးမှုမဖွဈအောငျ နှငျ့ စိတျဖိစီးမှုကို ဘယျလိုနညျးနဲ့ ဖွဖြေောကျမလဲဆိုတာကို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
၁။ ကောငျးမှနျစှာ အနားယူပါ။
ကိုယျဝနျဆောငျထားရတဲ့ မိခငျတှကေ ကိုယျ့ကိုကိုယျ ဂရုစိုကျပွီး စိတျရော ကိုယျပါ အနားယူဖို့ တကယျလိုအပျပါတယျ။ အလုပျလုပျနရေတဲ့ ကိုယျဝနျဆောငျတှအေတှကျ ကလေးအပျေါ အာရုံစိုကျဖို့ သငျ့အလုပျတှထေဲက အခြိနျတခြို့ကို ယူဖို့ အလှနျအရေးကွီးပါတယျ။
၂။ တဈယောကျယောကျနှငျ့ စကားပွောပါ
သငျ့ခန်ဓာကိုယျထဲမှာ ဟျောမုနျးအဆငျ့တှကေ ပွောငျးလဲမှုမြားကွုံရနိုငျတာကွောငျ့ သငျ့ကလေးနှငျ့ပတျသတျပွီး သို့မဟုတျ တခွားကိစ်စတှမှော စိတျဖိစီးမှု ခံစားနရေလြှငျ တဈယောကျယောကျနှငျ့ တိုငျပငျစကားပွောတာက အကောငျးဆုံးစိတျကူးတဈခု ဖွဈနိုငျပါတယျ။ စိတျဖိစီးမှု မွငျ့မားခွငျးက ကလေးကို ထိခိုကျစနေိုငျတာကွောငျ့ ကိုယျဝနျဆောငျတာနဲ့ပတျသကျပွီး ဖွဈပျေါလာတဲ့ အကွောငျးအရာမြားအားလုံးကို ကိုယျ့ပတျဝနျးကငျြမှာရှိတဲ့ မိဘ၊ ဆှမြေိုး မြားနှငျ့အတူ တခွား ကိုယျဝနျဆောငျမြား၊ ကလေးမိခငျမြားနဲ့ ပွောပွတိုငျပငျပွီး အတှအေ့ကွုံမြား ဖလှယျပေးပါ။
၃။ အစားအသောကျ အလအေ့ထ
သငျ့ရဲ့အစားအသောကျကို ဂရုစိုကျပါ။ ကိုယျဝနျဆောငျအခြိနျမှာ အာဟာရပွညျ့ဝပွီး အရသာရှိတဲ့ အစားအစာမြားကို စားသုံးပေးဖို့ အထူးလိုအပျပါတယျ။ ဗီတာမငျ၊ သတ်တုဓါတျနှငျ့ အိုမီဂါ ၃ ဖကျတီးအကျဆဈ ကွှယျဝသောအစားအစာက သငျ့ကိုပြျောရှငျနစေဖေို့ ကူညီပေးနိုငျပါတယျ။ မရှိမဖွဈလိုအပျတဲ့ အမိုငျနိုအကျဆဈက သငျ့စိတျခံစားမှုကို မွှငျ့တငျဖို့ ကူညီပေးနိုငျပွီး ဒိနျခဉျြ၊ ဥမြား၊ ထောပတျ၊ ငါး၊ ကွကျသား၊ အစအေ့ဆနျမြား၊ အခှံမာသီးမြားမှာ တှနေို့ငျပါတယျ။ သငျ့ခန်ဓာကိုယျ ကနျြးမာပွီး ရဓေါတျရရှိနစေဖေို့ တဈနကေို့ ရေ ၆ဖနျခှကျမှ ၈ဖနျခှကျဝနျးကငျြ ရမြေားမြားသောကျသုံပေးဖို့ လိုပါတယျ။
၄။ သငျ့တငျ့တဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျးကို ပွုလုပျပါ
လကေ့ငျြ့ခနျးက သငျ့စိတျကို မွှငျ့တငျဖို့ ကူညီပေးနိုငျပွီး လကေ့ငျြ့ခနျးအမြိုးအစားတခြို့က ပွုလုပျဖို့ လုံးဝစိတျခနြိုငျပါတယျ။ ရကေူးခွငျးက အကောငျးဆုံးလကေ့ငျြ့ခနျးဖွဈနိုငျပွီး ကိုယျဝနျဆောငျ ယောဂကစားခွငျး၊ အကွောလြှော့ခွငျး၊ မိနဈ၂၀ခနျ့ လမျးလြှောကျခွငျး၊ အသကျရှုလကေ့ငျြ့ခနျး၊ အပနျးဖွခွေငျး၊ တရားထိုငျခွငျးတှကေလညျး စိတျဖိစီးမူကို လြှော့ခပြေးနိူငျပါတယျ။ သငျသညျ အလုပျလုပျနတေဲ့ အမြိုးသမီးတဈယောကျဖွဈလြှငျ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျဖို့ ခကျခဲနိုငျပါတယျ။ အဲ့ဒီအတှကျ အခြိနျတခြို့မှာ သငျ့ခန်ဓာကိုယျအကွောဆနျ့ခွငျး တခြို့လကေ့ငျြ့ခနျးကို ပွုလုပျပေးပါ။
၅။ မှေးဖှားဖို့နှငျ့ မိသားစုဘဝအတှကျ စတငျပွငျဆငျပါ
မီးမဖှားမီ ကွိုတငျပွငျဆငျခွငျးက စိတျကိုပြျောရှငျစသေလို စိတျဖိစီးမှုကိုလညျး သကျသာစပေါတယျ။ သငျ့ဆရာဝနျ သို့မဟုတျ သားဖှားဆရာမနဲ့ စကားပွောဖွငျးနှငျ့ ကလေးမှေးဖှားမယျ့ အစီအစဉျအတှကျ စီစဉျပါ။ ကလေးအတှကျလိုအပျတာတှလေညျး ကွိုတငျစုဆောငျးနိုငျပါတယျ။ အတှအေ့ကွုံရှိတဲ့ မိခငျမြားနှငျ့ စကားပွောပါ။ မမှေးရသေးတဲ့ ရငျသှေးနှငျ့အတူ မိသားစုဘဝတဈခုအတှကျ ကွိုတငျစီစဉျပါ။
သငျလိုအပျတဲ့အရာတှကေို ဝယျဖို့အတှကျနှငျ့ မီးဖှားဖို့အတှကျ စာရငျးတဈခုပွုလုပျပွီး ငှစေုဆောငျးထားပါ။ ကိုယျ့မှာ အဆငျသငျ့မရှိလြှငျ မိတျဆှမြေား ဒါမှမဟုတျ မိသားစုထံမှ သငျ့ကို ခြေးနိုငျမယျ့သူရှိမရှိ ရှာဖှပေါ။ သငျ့ရဲ့အလုပျခှငျကနေ သငျ့ရဲ့ ခှငျ့အကြိုးခံစားခှငျ့ကို သိဖို့ HR ကိုယျစားလှယျမြားနှငျ့ စကားပွောဆိုပါ။
သငျ့မှာ စိတျဖိစီးမှု ခံစားနရေဆဲဆိုလြှငျ ဆရာဝနျတဈဦးနှငျ့ တိုငျပငျဆှေးနှေးတာက အကောငျးဆုံး စိတျကူးတဈခု ဖွဈနိုငျပါတယျ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အတွင်း စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့ဖြေဖျောက်ကြမလဲ ?
ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီးအများစုသည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိတ်ဖိစီးမှုများကို ခံစားကြရတတ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်အတွင်း ခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းလဲမှု၊ ညဘက်နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်မပျော်တာ၊ မမွေးဖွားသေးတဲ့သားသားမီးမီးအတွက် စိုးရိမ်သောကရောက်ရတာတွေအတွက် စိတ်ဖိစီးမှုများ ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ စိုးရိမ်ပူပန်မှု မြင့်မားခြင်းက အမှန်တကယ် ကလေးကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ Cortisol ၊ စိတ်ဖိစီးမှုဟော်မုန်းက အချင်းကို ဖြတ်သန်းသွားနိုင်ပြီး ကလေးရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံဖြိုးတိုးတတ်မှုအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အတွင်း စိတ်ဖိစီးမှုမဖြစ်အောင် နှင့် စိတ်ဖိစီးမှုကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ဖြေဖျောက်မလဲဆိုတာကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
၁။ ကောင်းမွန်စွာ အနားယူပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ထားရတဲ့ မိခင်တွေက ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဂရုစိုက်ပြီး စိတ်ရော ကိုယ်ပါ အနားယူဖို့ တကယ်လိုအပ်ပါတယ်။ အလုပ်လုပ်နေရတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေအတွက် ကလေးအပေါ် အာရုံစိုက်ဖို့ သင့်အလုပ်တွေထဲက အချိန်တချို့ကို ယူဖို့ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။
၂။ တစ်ယောက်ယောက်နှင့် စကားပြောပါ
သင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ဟော်မုန်းအဆင့်တွေက ပြောင်းလဲမှုများကြုံရနိုင်တာကြောင့် သင့်ကလေးနှင့်ပတ်သတ်ပြီး သို့မဟုတ် တခြားကိစ္စတွေမှာ စိတ်ဖိစီးမှု ခံစားနေရလျှင် တစ်ယောက်ယောက်နှင့် တိုင်ပင်စကားပြောတာက အကောင်းဆုံးစိတ်ကူးတစ်ခု ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှု မြင့်မားခြင်းက ကလေးကို ထိခိုက်စေနိုင်တာကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အကြောင်းအရာများအားလုံးကို ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ မိဘ၊ ဆွေမျိုး များနှင့်အတူ တခြား ကိုယ်ဝန်ဆောင်များ၊ ကလေးမိခင်များနဲ့ ပြောပြတိုင်ပင်ပြီး အတွေ့အကြုံများ ဖလှယ်ပေးပါ။
၃။ အစားအသောက် အလေ့အထ
သင့်ရဲ့အစားအသောက်ကို ဂရုစိုက်ပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အချိန်မှာ အာဟာရပြည့်ဝပြီး အရသာရှိတဲ့ အစားအစာများကို စားသုံးပေးဖို့ အထူးလိုအပ်ပါတယ်။ ဗီတာမင်၊ သတ္တုဓါတ်နှင့် အိုမီဂါ ၃ ဖက်တီးအက်ဆစ် ကြွယ်ဝသောအစားအစာက သင့်ကိုပျော်ရွင်နေစေဖို့ ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ အမိုင်နိုအက်ဆစ်က သင့်စိတ်ခံစားမှုကို မြှင့်တင်ဖို့ ကူညီပေးနိုင်ပြီး ဒိန်ချဉ်၊ ဥများ၊ ထောပတ်၊ ငါး၊ ကြက်သား၊ အစေ့အဆန်များ၊ အခွံမာသီးများမှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ သင့်ခန္ဓာကိုယ် ကျန်းမာပြီး ရေဓါတ်ရရှိနေစေဖို့ တစ်နေ့ကို ရေ ၆ဖန်ခွက်မှ ၈ဖန်ခွက်ဝန်းကျင် ရေများများသောက်သုံပေးဖို့ လိုပါတယ်။
၄။ သင့်တင့်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းကို ပြုလုပ်ပါ
လေ့ကျင့်ခန်းက သင့်စိတ်ကို မြှင့်တင်ဖို့ ကူညီပေးနိုင်ပြီး လေ့ကျင့်ခန်းအမျိုးအစားတချို့က ပြုလုပ်ဖို့ လုံးဝစိတ်ချနိုင်ပါတယ်။ ရေကူးခြင်းက အကောင်းဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်နိုင်ပြီး ကိုယ်ဝန်ဆောင် ယောဂကစားခြင်း၊ အကြောလျှော့ခြင်း၊ မိနစ်၂၀ခန့် လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ အသက်ရှုလေ့ကျင့်ခန်း၊ အပန်းဖြေခြင်း၊ တရားထိုင်ခြင်းတွေကလည်း စိတ်ဖိစီးမူကို လျှော့ချပေးနိူင်ပါတယ်။ သင်သည် အလုပ်လုပ်နေတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်လျှင် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် အချိန်တချို့မှာ သင့်ခန္ဓာကိုယ်အကြောဆန့်ခြင်း တချို့လေ့ကျင့်ခန်းကို ပြုလုပ်ပေးပါ။
၅။ မွေးဖွားဖို့နှင့် မိသားစုဘ၀အတွက် စတင်ပြင်ဆင်ပါ
မီးမဖွားမီ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းက စိတ်ကိုပျော်ရွင်စေသလို စိတ်ဖိစီးမှုကိုလည်း သက်သာစေပါတယ်။ သင့်ဆရာဝန် သို့မဟုတ် သားဖွားဆရာမနဲ့ စကားပြောဖြင်းနှင့် ကလေးမွေးဖွားမယ့် အစီအစဉ်အတွက် စီစဉ်ပါ။ ကလေးအတွက်လိုအပ်တာတွေလည်း ကြိုတင်စုဆောင်းနိုင်ပါတယ်။ အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ မိခင်များနှင့် စကားပြောပါ။ မမွေးရသေးတဲ့ ရင်သွေးနှင့်အတူ မိသားစုဘ၀တစ်ခုအတွက် ကြိုတင်စီစဉ်ပါ။
သင်လိုအပ်တဲ့အရာတွေကို ၀ယ်ဖို့အတွက်နှင့် မီးဖွားဖို့အတွက် စာရင်းတစ်ခုပြုလုပ်ပြီး ငွေစုဆောင်းထားပါ။ ကိုယ့်မှာ အဆင်သင့်မရှိလျှင် မိတ်ဆွေများ ဒါမှမဟုတ် မိသားစုထံမှ သင့်ကို ချေးနိုင်မယ့်သူရှိမရှိ ရှာဖွေပါ။ သင့်ရဲ့အလုပ်ခွင်ကနေ သင့်ရဲ့ ခွင့်အကျိုးခံစားခွင့်ကို သိဖို့ HR ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် စကားပြောဆိုပါ။
သင့်မှာ စိတ်ဖိစီးမှု ခံစားနေရဆဲဆိုလျှင် ဆရာဝန်တစ်ဦးနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးတာက အကောင်းဆုံး စိတ်ကူးတစ်ခု ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Previous articleသငျ့ကလေးကို မိခငျနို့ ၆လတိုကျကြှေးခွငျးက ဆီးခြိုရောဂါ၏ အန်တရာယျကို ထကျဝကျလြော့ခနြိုငျ
Next articleကိုယျဝနျဆောငျအမြိုးသမီးမြားအတှကျ အကောငျးဆုံး အစားအစာမြား